Kukanda Zvikamu Mugadziri
Izvo zvikamu zvekukanda zvinoshandiswa mune yakakosha michina mukati meiyo otomatiki indasitiri, senge maindasitiri marobhoti kana michina maturusi. Retool Kambani inogadzira dhizaini uye kugadzirwa kwemhando dzese dzemavharuvhu uye kugadzirwa kwenzvimbo dzekudyara nekukanda zvikamu. Kunyanya kuzvipira kumusoro -...
Chii chinonzi vharuvhu yemoto?
Mavharuvhu emoto - Mavharuvhu emoto ane hunyanzvi hwekuonekwa uye basa rakanaka. Iine yakakwana mhando yekudzora chishandiso uye yepamusoro yekuongorora michina, tinogona kuve nechokwadi chekuti zvese zvekutengesa zvigadzirwa zvinokodzera. Mumwe wako waunovimba naye. Valve iri rinowanzo re generic muindasitiri yekudzivirira moto. Ivo ...
Chii Chinonzi Bonnet?
Mabhoneti zvimwe zvezvinhu zvakakosha zvegedhi uye mhando yepasi. Nekubvarura bhoneti, vashandi vekuchengetedza vanogona kuwana maitiro emukati uye vanogona kutsiva zvinhu zvakaita sechigaro, hunde, nezvimwe (trim). Mabhoneti evhavhavha anowanikwa mune akawanda magadzirirwo uye mamodheru (ayo akajairwa ndeaya: ...
Simba Rejenareta Rakachengeteka Here?
Mune jenareta, alternator, kana dynamo, iyo armature windings inogadzira magetsi emagetsi, ayo anopa simba kune rekunze dunhu. Iyo armature inogona kunge iri pane iyo rotor kana iyo stator, zvinoenderana nedhizaini, neiyo munda coil kana magineti pane imwe chikamu. Hazvigoneke kuti w ...
Iyo Jenareta Inogadzira Sei Magetsi?
Magenereta michina inobatsira inopa simba remagetsi panguva yekudzimwa kwemagetsi uye inodzivirira kumira kwemabasa ezuva nezuva kana kukanganisa mashandiro ebhizinesi. Jenareta anowanikwa mune akasiyana magetsi uye epanyama masisitimu ekushandisa mune akasiyana maficha. Mune zvinotevera ...
Screw YeNyama Grinder Machinery Mugadziri
Screw - Ichi sikuruu yemuchina wekukuya nyama. Makasitoma ane akaomarara mhando, kunyatsoita uye zvekunze nzvimbo yekurapa zvinodiwa kune izvo zvigadzirwa. Isu tinogadzira akasiyana maratidziro zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi. Mushure mekuratidzira girazi zvigadzirwa zvine yepamusoro kunyatso uye zvimwe ...
Vanyengeri Vanoongororwa Sei?
Impuls kana impellor irori rinoshandiswa kuwedzera kumanikidza nekuyerera kwemvura. Icho chakapesana ne turbine, iyo inoburitsa simba kubva, uye inoderedza kumanikidza kwe, inoyerera mvura. Impellers anosarudzwa zvichienderana neanerodynamic performance uye mechanical kutendeka. Zvokuimba ...
Pamusoro Kurapa Zvikamu Zvekutengesa
Tinogona kuita ese marudzi ekurapa kwepasire uye kurapwa kwekupisa, saka tinogona kusangana neyako akasiyana zvigadzirwa zvinodiwa. Surface kurapwa kunosanganisira pickling passivation, sandblasting, zingi yakanamirwa pamifananidzo, blackening, Electro-makorari, girazi makorari etc. Heat kurapwa zvinosanganisira annealing, tempering, normalizing, que ...
Ndezvipi Izvo Zvivakwa zveAlloy Simbi?
Simbi yesimbi ndiyo simbi inoiswa nezvakasiyana zvinhu muhuwandu hwakazara pakati pe1.0% kusvika 50% pahuremu hwekuvandudza michina yayo. Iko kune kazhinji zvikamu zviviri zvesimbi yesimbi: yakaderera alloy uye yakakwira chiwanikwa. Chero chipi zvacho chine pasi pechisere che8% alloying element chinonzi chakaderera zvese ...
Holiday Cherechedzo Ye2021 Chitubu Mutambo
ne admin pane 21-02-08
Vadiwa vatengi, 2021 Mutambo weChirimo uri kuuya. Chekutanga pane zvese, Tinotora mukana uno kukutendai mose nekudyidzana kwakakosha kwakapihwa panguva ye2020. Pano, Shijiazhuang Retool anokuda iwe gore rakanaka, mhuri inofara uye zvese zvakanaka! Kuti vafarire echinyakare Spring Festi ...
Chikafu Machina Zvikamu Mugadziri
Isu tinopa Zvekudya Service Zvikamu zveako zvekutengesa uye zvemumba zvinangwa. Chinangwa chedu chikuru ndechekupa imwe yekumira shopu yezvinhu zvese zvekutengesa zvekicheni zvikamu kune vatengi vedu. Semuridzi weresitorendi, ibasa rako kuchengetedza bhizinesi rako richishanda zvakanaka. Chikafu Mashini zvikamu ...
Valve Zvikamu Vagadziri
Retool Kambani inogadzira dhizaini uye kugadzirwa kwemhando dzese dzemavharuvhu uye kugadzirwa kwenzvimbo dzekudyara nekukanda zvikamu. Kunyanya kuzvipira kumusoro-kumagumo kunyatso kurasa uye kwakadzika kugadzira kwesimbi isina simbi, kupisa kupisa simbi, kupfeka kusingaite simbi, kabhoni simbi, uye ...